Xaflad Kulmisay Mucaarid iyo Muxaafid Oo Loogu Wanqalay Gobol-nimada Gabilay ayaa Maanta Lagu Qabtay Xarunta Gobolkaas ee Gabilay | WWW.SOMALILAND.NO
Xaflad Kulmisay Mucaarid iyo Muxaafid Oo Loogu Wanqalay Gobol-nimada Gabilay ayaa Maanta Lagu Qabtay Xarunta Gobolkaas ee Gabilay
Posted on Maajo 25, 2008 by Weriye2
Gabilay 25.05.08 Xaflad balaadhan oo loogu wanqalay Gobolka cusub ee Gabilay ee uu dhawaanta magacaabay Md. Daahir Rayaale Kaahin Kaahin ayaa maanta lagu qabtay Magaalo-madaxda Gobolkaas ee Gabilay, isla markaana waxa ka soo qayb-galay Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, Guddoomiyayaasha Xisbiyada Mucaaridka ah Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), Faysal Cali Waraabe, Guddoomiye ku-xigeenada Golayaasha Baarlamanka (Guurtida iyo Wakiillada) Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre, Marwada Daahir Rayaale Kaahin Marwo Huda Barkhad Aadan, Xoghayaha Xisbiga Udub Maxamed Ismaaciil Bullaale, Wasiiro tiro badan oo ka socday Xukuumadda Somaliland, Xubnaha Komishanka doorashooyinka Qaranka, Maamulka Gobolka iyo degmooyinkiisa, dadweyne aad u fara badan iyo Marti-sharaf kale.
Munaasibadan Gobolka cusub lagu soo dhaweeyay ayaa ahayd mid cishooyinkii ugu dambeeyay si wayn abaabulka isku duba ridka qaban-qaabada Xafladan.
Maanyarka Gobolka Gabilay Xuseen Maxamed (Xuseen-Jameeco), isla markaana waxa uu mahad-naq balaadhan u soo jeediyay guud ahaanba Masuuliyiinta iyo marti-sharaftii halkaa ka soo xaadirtay isaga oo ku soo dhawaynaya Xaflada loogu magaca daray wanqasha Gobolka cusub, “Aniga oo ku hadlaya afka Gobolka Gabilay, waxaanu idinku soo dhawaynaynaa Mudanayaal iyo Marwooyin Xaflada wanqasha ah ee Gobolkan Gabilay, waxaanan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan.” Sidaa ayuu yidhi Maayarka Gobolka Gabilay.
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, oo munaasibadaa ka hadlay ayaa sheegay in marka Gobol laga hadlayo dhinacyo badan laga qiimeeyo
“Gobolkan Gabilay wax badan ayuu u soo halgamayay gobolnimo, waxaana maanta farxad ii ah inaan idinkala soo qayb-galo farxada aad ku jirtaan. Hadaba waxaan leeyahay maadaama la bixiyay Gobolo badan, dabcan Goboladu ha ogaadaan waxa looga baahan yahay, Gobolna marka la qiimaynayo waxa lagu qiimeeyaa dadkiisa, dalka inta uu xukumo iyo wax soo saarkiisa, waana saddexda shay ee hadhaw lagu qiimayn doono Goboladii la bixiyay.” Sidaa ayuu yidhi Axmed Yuusuf Yaasiin.
Waxaanu tilmaamay Madaxweyne Ku-xigeenku in dadka reer Gabilay ay hada ka soo gudbeen jahaad yar, ,balse uu u hadhsan yahay jahaad aad u wayni. Waxaanu u soo jeediyay dadka reer Gabilay in ay soo dhaweeyaan cid kasta oo dagaysa Gobolka, isla markaana wax ku soo kordhin karta.
“Waxaan xasuusnahay, oo ay kuu sheegayaan Odayaasha markaad waraysato, dagaalkii labaad ee Aduunku markuu dhacay ee Berberi xidhantay halkan (Gabilay) ayuun baa loo soo doontay Hadhuudhkii Cimi Jaamaca la odhan jiray. Markaa reer Gabilayaw waxaad ku xisaabtantaan barrigaa dadka idiin imanayay wax yar ayuu ahaa, laakiin maanta dad badan iyo baabuur waawayn ayaa idiin imanaya.” Ayuu yidhi Madaxweyne ku-xigeenku,
waxaanu ku dooday in raashin yaraanta dunida ka jirtaa ay saamayn ku yeelan karto cuntada Somaliland oo badi ka timaada wadamada dibada. Isaga oo carabka ku adkeeayay in ay Xukuumad ahaan warshadaha Arabikhida iyo Hadhuudhka lagu ridqo, si dalku isugu filaan karo.
Axmed Yuusuf Yaasiin, mar uu ka hadlayay dhinaca sheegashada magaalooyinka waawayn, sida Hargeysa oo kale.
“Waxaan Somaliland odhanayaa, Somaliland dhul ma kala lalaha, Magaalo ma kala laha, waxaan ka jawaabayaana waa arrin aan maqlay oo aan xaalka bixinaayo, ninka reer Somaliland ahi meesha uu doono ayuu Somaliland ka degi karaa ninka fidmada wada ayuun baana la iska qabanayaa, kaasuumbaana loo yeedhayaa oo la odhanayaa adeer fidmada naga jooji.”
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi Madaxweyne ku-xigeenku, “Waxaan la hadlayaa Caasimada (Hargeysa) ee aan ku dhashay Caasimada waxa soo degaaya khalqiga oo dhan ninka yidhaahda hebalaw ka baxna waa in la xidhaa, waayo waa la camirayaa, oo Washinton cidi malaha, New york cidi malaha. Markaa hadaanu reer Hargeysa nahay waxaan ku talinayaa yaan sidii Caasimadaha Bagistaan iyo Naanjeeriya Caasimadeena laga guurin, waxaanan leeyahay cid kasta oo wax haysata soo dhaweeya.”
Sidoo kale, waxa uu Axmed Yuusuf, rajadiisa ku wajahan arrimaha khilaafyada siyaasada, “Insha Allaahu tacaalaa dalkeenu daganaansho ayuu galayaa, Axsaabtii iyo cid walba waa la wadahadlay, wax inaga xumaanayaana ma jiraan ee hore ayaynu umaraynaa, waxaanan rajaynayaa halkan aynu maanta joogno inaynu ka dabaal-degi doono dhawaan wadankeena oo la ictiraafay.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweyne ku-xigeenka.
Isla markaana Madaxweyne ku-xigeenku soo gaadhsiiyay dadka Gobolka Gabilay fariin uu uga siday Madaxweyne Rayaale, “Waxaan ku soo geba-gabaynayaa kalmadii Madaxweynuhu I yidhi iga dheh, tahniyad balaadhan ayaanu u soo jeediyay reer Gabilay, isaga oo leh kor u socda, oo noolaada, bash-bash iyo barwaaqana ku noolaada.” ayuu hadalkiisa sii raaciayy oo uu yidhi Axmed Yuusuf Yaasin.
Wasiirka Madaxtooyada Nuur Amiin, oo ka mid ahaa xubnaha qabab-qaabada Munaasibadaas, waxa ka mid ahaa hadaladiisii oo uu yidhi, “Masuuliyiinta iyo marti-sharafta halkan u timi Gobolkan hambalyadiisa, ee kuraasidu qaadi wayday ee wada taagan, waanu ka raali-gelinaynaa arrintaas, waxaananu idin leenahay si farxad leh ugu soo dhawaada Gobolkan cusub ee Gabilay.”
Ayuu yidhi Wasiir Nuur Amiin, isla markaana intaa ka dib waxa uu holaday inuu mikrifoonka ku soo dhaweeyo Madaxweyne Ku-xigeenka Axmed Yuusuf Yaasiin, “Waxa weeye cadceed ayaynu fadhinaa, waxaan ku soo dhawaynayaa (Mikrifoonka) Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Madaxtooyadu.
Laakiin, arrintaasi waxa ka cadhaysiisay badiba dadweynihii madasha ku sugnaa, oo gaashaanka ku dhuftay sida uu wax u waday Wasiirku “Guddoomiyayaasha Mucaaridka ayaa hadlaya, ee xaflada lama soo xidhi karo.” Ayay ku dhawaaqayeen dadkii ka soo horjeestay hadalka Wasiirka.
Wasiirka, oo loo arkay inuu wado qorshe Xukuumadda uu ka tirsan yahay hore looga arkay, oo ahayd in Munaasibadaha ay gacanta badan ku leedahay laga horjoogsado in ay Mucaaridku ka hadlaan, isla markaana isaga oo dejinaya dadka dareenkoodu kor u kacay waxa uu yidhi, “Arrintaa waa la iga cudur-daartay, waxaanan mikrifoonka ku wareejinayaa ninkii xidhiidhinayay xaflada.”
Waxaana codbaahiyaha si toos ah ula wareegay xidhiidhiyihii Xaflada, waxaanu ku soo dhaweeyay mikrifoonka Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Kulmiye Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), oo ay dadkii goobta joogay si diiran ugu soo dhaweeyeen sacab iyo mashxarad, socday qadar daqiiqado ah. Axmed-siilaanyo waxa ka mid ahaa hadaladiisii oo uu yidhi,
“Waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay, qiimo iyo sharafna noo ah inaanu maanta (shalay) idin kala soo qayb-galo farxada iyo dabaal-dega aynu maanta ugu dabaal-degayno Gobol-nimada Gabilay.”
Guddoomiyaha Kulmiye isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waad ogtihiin oo hadaanu nahay Xisbiga Kulmiye ilaa maalintii la aas-aasay Xisbiga marka aanu Gabilay nimaadnaba waxa uu balan-qaadkayagu ahaa anaga oo aan meelkale u gudbin in ay Gabilay noqoto Gobol. Maanta Gobolkii waad haysaan waananu idiinku hambalyaynaynaa, waana idinku taageersanahay, Gobolka Gabilayna aad ayuu uga tilmaamanyahay qaybo badan oo dalkeena ka mid ah, waa Gobol taariikh wayn ku leh, oo xorayntii dalkan Somaliland ayuu kaalin wayn ka qaatay.”
Guddoomiye Siilaanyo, waxa uu sheegay in Gobolka Gabilay aad ugu fiican yahay dhinaca wax soo saarka, dhan kasta oo laga eegaba
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa ku dooday in Gobolnimada Gabilay dib u dhac ku yimi, oo ay muhiim ahayd in bari hore loo magacaabo Gobol. Isla markaana waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray Faysal Cali Waraabe, guud ahaanba dadka reer Gabilay, ee u dabaal-degaya farxada Gobolkooda.
Waxaana ka mid ahaa hadaladii Guddoomiyaha Xisbiga Ucid, oo uu yidhi, “Wallaalayaal Gobolka Gabilay wakhtigii loo baahnaa wuu dhaafay, laakiin maantana Illaahay mahadii kol hadaynu helay Gobolkii, Gobolka Gabilay maaha mid jujuub ah, ee waa mid xaq ah, haday dawladani bixisay Gobolkan waanu hambalyaynaynaa, horumarkiisana anaga ayaa ka bilaabayna. Wallaalayaal waxaanu jecelahay in Gobolkan Gabilay, Goboka Boorama iyo Gobolka Oodweyne ay Somaliland quudiyaan.”
“Baylah wayn ayaa ka muuqata Gabilay, hadii baylahdan oo kale ku dhacdo Gobolku khasaare ayuu noqonayaa, waana inaad u doorataan dad wanaagsan oo wax idiin qabta, oo aan cashuurta ku qayilin.” Ayuu hadalkiisa ku sii ladhay Faysal Cali Waraabe.
Xogahayaha Guud ee Xisbiga UDUB Maxamed Ismaaciil Bullaale, ayaa isaguna kalmadiisa ka yidhi Xafladaas lagu maamuusayay Gobol-nimada Gabilay, waxa uu tilmaamay in Gobolka Gabilay yahay Gobol wayn oo soo jireen ah, isla markaana ah meelaha ugu mudan ee dhaqaalha dalku ka soo baxo.
“Gabilay dawlado badan oo kala dameeyay ayaa soo maray, mid walibana indhaha ayay ka qarsatay inay qirto ama magacawdo Gobol-nimada Gabilay.” Sidaa ayuu yidhi Xoghayaha guud ee Xisbiga Udub. Isla markaana waxa uu hambalyo u diray dadka reer Gabilay, dabaal-dega Gobolkooda darteed.
Marwada Madaxweyne Rayaale Huda Barkhad Aadan, oo munaasibadaa ka qayb-gashay, ayaa iyaduna kalmadeeda halkaas ka tidhi, “Waxa noo sharaf ah in aanu maanta idinkala soo qayb-galo Xafladan dabaal-dega Gobolka Gabilay, waxaananu leenahay Mabruug. Waxa anaga sharaf noo ah, oo aan Illaahay ugu mahad-naqayaa in anaga oo joogna Madaxtooyada Gobolka Gabilay lagu dhawaaqo, aad iyo aad ayaanay noo taabanaysaa gaar ahaan anaga.” Sidaa ayay tidhi Marwada Md. Daahir Rayaale Kaahin.
Waxa iyaguna halkaas hadalo mahad-naq iyo soo dhawayn isugu jira Xafladaa ka soo jeediayay qaar ka mid ah Salaadiinta, Cuqaasha, Wax-garadka iyo Aqoonyahanka, Xildhibaanada Golaha Deegaanka ee Gobolka Gabilay, kuwaas oo guud ahaanba u mahad-naqay Xukuumadda Gobolka bixiysay ee Daahir Rayaale, sidoo kalena waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin magacaabida Gobolkan. waxaanay u mahad-naqeen cid kasta oo ka qayb-gashay munaasibada loogu dabaal-degayay Gobolka Gabilay.
« TACSI GEERI TIIRAANYO LEH Hanbalyo iyo bogaadin ku socota gobalnimada gobalka gabilayoo ka timid ururka horumarinta iyo waxbar‏ ee Alaybaday. »